Dabbaalyahankii Badbaadiyey In Ka Badan 100 Qof Oo Biyo Ku Qarqoormi Gaadhay – Borama News Network
Dabbaalyahankii Badbaadiyey In Ka Badan 100 Qof Oo Biyo Ku Qarqoormi Gaadhay
Muddo sannado ah, Shiva waxa uu booliska ka caawineyay inay meydad ka helaan harada Hussain Sagar ee ku taalla magaalada koonfurta Hindiya ku taal ee Hyderabad. Ka dibna maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu ka joojiyey in uu haradaasi isku tuuro, isagoo badbaadiyay nolol markii ugu horreysay. Weriyaha BBC Telugu ee Balla Satish sida ay soo tebisay.
Shiva, oo adeegsada hal magac oo keliya, ayaa sheegay inuu jiray 10 sano markii uu la kulmay koox boolis ah oo u ballanqaadeen inay lacag siinayaan qof kasta oo meyd ka keena balli u dhow.
Booliiska Hindiya ayaa ah kuwo aan heysanin dhaqaalo iyo sida oo kalena tababar ahaaan liita. Qaar badan ma yaqaanaan sida loo dabaasho lamana siiyo lacag ay ku kiraystaan xirfadlayaal kaladuwan. Markaa ma aha wax aan caadi ahayn inay iyagu ku tiirsanaadaan qaabab aan rasmi ahayn, oo khatarteeda lahaan karta.
Laakiin markii Shiva markii uu ku tabarucay xirfaddiisa, ayuu yidhi, way la yaabeen. “Markii hore way diideen inay aqbalaan aad ayaan u yaraa. Laakiin waan ku qanciyay iyaga,” ayuu yidhi.
Shaqadii wuu qabtay waxa uuna ka helay 40 rupees, hadda qiimahiisu waa $ 0.54 ama £ 0.42 laakiin lacag isa macno u leh ayay ahayd waqtigaas.
Taasi waxay ahayd 20 sano ka hor. Hadda waa 30 jir wuxuuna wali caawinayaa booliska deegaanka.
Shiva waxa uu ku nool yahay meel dhinaca midig ka xigta Hussain Sagar, oo ah haro weyn oo macmal ah oo ku taal badhtamaha magaalada. Haradan oo ah goob dalxiis oo caan ah, ayaa sidoo kale loo isticmaalaa inta lagu guda jiro damaashaadka Ganesha si loogu quusiyo sanamyada cibaadada ee Hinduuga.
Laakiin haradani sida oo kale waa goob ay dad badani u yimaadaan inay ku dhintaa, Shiva badanaana wuxuu booliska ka caawiyaa inay maydadka ka soo saaraan biyaha. Mararka qaarkood, wuxuu kaloo ka caawiyaa in uga soo saarop maydadka wabiyada kale iyo harooyinka kale magaalada.
Shiva waxa sida oo kale qabtaa wax ka badan meydadka oo laga soo saaro harada – badanaa wuxuu badbaadiyaa dadka ka hor inta aysan biyaha isku tuurin, mararka qaarkoodna xitaa ka dib.
“Waxaan waayey tiradii inta mayd ee aan helay. Laakiin waxaan badbaadiyey 114 qof,” ayuu u sheegay BBC.
Wuxuu hadda sidoo kale xaaskiisa u tababarayaa dabaasha si ay gacan uga geysato soo saarista meydadka haweenka.
Isbatooraha B Dhanalakshmi, oo haysta saldhigga booliiska ee ku dhow harada Hussain Sagar, wuxuu qirayaa in Shiva uu “caawimaad weyn” u ahaa iyaga.
“Ma xaqiijin karo inta qof ee uu badbaadiyey sannadihii la soo dhaafay, laakiin waxaan aaminsanahay inay ka badan yihiin 100,” ayay u sheegay BBC. Ismiidaamintan ayaa wali dambi ka ah Hindiya dad badan oo Shiva badbaadiyana way cararaan xitaa ka hor inta uusan booliska u wicin.
Shiva wuxuu sheegay inuusan waligiis aqoon waalidkiis, carruurnimadiisana inta badan ku qaatay waddooyinka, isagoo waqti kooban ku qaatay xarumaha agoonta. isla sida oo kalena – ma hubin karo inta uu jiro da’ ahaan – wuxuu bilaabay inuu la noolaado haweeney iyo carruurteeda oo waliba hoy la’aan ahaa. Wuu ku soo dhowaaday iyaga waana mid ka mid ah wiilasheeda qofka baray dabaasha, oo ah xirfad wax ka beddeshay noloshiisa.
Waxaan waayey saaxiibo badan sanadihii la soo dhaafay – balwadaha, cudurrada, gaajada, shilalka” ayuu yidhi. Wiilkii isaga baray dabaasha – “walaalkay Lakshman,” ayuu ugu yeedhaa – si kadis ah ayuu u qarraqmay, saaxiib kale oo aad ugu dhawaa ayaa dhintay isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo qof kale.
Badbaadinta noloshu waxa ay u keentaa xoogaa lacag ah oo dheeri ah – mararka qaarkood dadka uu badbaadiyo si weyn ayay ugu mahadnaqaan. Baahinta saxaafadda maxalliga ah ayaa ka dhigtay qof caan ah, waxayna u keentay door yar in uu ka qaato filimada Telugu ah. Laakiin Shiva wuxuu sheegay in uusan u tixgelinin badbaadinta nolosha shaqo ahaan.
Dad Shacab Ah Oo Lagu Laayay Degmada Warsheekh Ee Gobolka Shabeelaha Dhexe
Dowlada Fadaraalka Somaliya Oo Kulan Deg-Deg Isugu Yeedhay Diblomaasiyiin Ku Sugan Muqdisho
Dab Xoogan Oo Ka Kacay Shirkada Samaysa Talaalka Covid 19 Iyo Dad Ku Dhintay Dabkaasi
Bnnstaff Bnnstaff January 22, 2021
Khilaafka Biyo Xidheenka Itoobiya Oo Cirka Isku Shareeray Iyo Trump Oo Khiyaamay Itoobiya
Jamhuuriyiinta Aqalka Sare Oo Wada Qorshe Dib Loogu Dhigayo Dacwad Ku Soo Oogidda Trump